Yeh Ballet(2020) - Channel Zone
Posted by Little Man, Released on July 20, 2020, More episodes Yeh Ballet
Download Yeh Ballet(2020), Watch Yeh Ballet(2020), don't forget to click on the like and share button. Series Yeh Ballet always updated at Channel Zone. Don't forget to watch other series updates.
Yeh Ballet(2020)IMDB rating 7.6ရရှိထားတဲ့ Drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာရှုဖ်ဟာဆေးခြောက်ရောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ပြီးအားတဲ့အခါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝါသနာပါရာ အကပြိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ရုပ်သံက လွှင့်တဲ့ အကပြိုင်ပွဲတွေကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အာရှုဖ် တစ်ယောက်ဝင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်… သူ့လိုပဲ နီးရှူးဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာလည်း
အကကိုဝါသနာထုံတယ်…သို့ပေမယ့် (၂)ယောက်လုံးက ငွေကြေးအဆင်မပြေလို့ပါရမီပါပေမယ့် သင်တန်းကောင်းကောင်းမတက်နိုင်ဘူး..ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အကသင်တန်းတစ်ခုတက်ပြီး နိုင်ငံကျော်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပါတော့တယ်…ဒီ India ကားက တခြား အကကားတွေလို မဟုတ်ဘူး…တမူထူးခြားတယ်…စနစ်တကျ အကင်သင်တဲ့အခန်းတွေပါသလို သရုပ်ဆောင်တွေကလည်းတကယ်ကျွမ်းကျင်တယ်…. ကြည့်ရအတော်မိုက်တယ်… ကိုင်းသူတို့အောင်မြင်ကြမလားဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်ကြပါဉီး